Xagjir Taram oo aad loo cambaareeyay kadib sawirka Ilhaan Cumar - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xagjir Taram oo aad loo cambaareeyay kadib sawirka Ilhaan Cumar
Siyaasiyiinta Maraykanka ee labada xisbi ee dalkaasi ayaa si aada u cambaareeyay xagjir Taram oo sawirka xildhibaan Ilhaan Cumar oo uu ka dambeeyo duqeyntii Maraykanka ee sanadii 2001 sudhey bartiisa baraha bulshada.
“Way iska cadahay wuxuu ula jeedo oo ah dadkii wax kulahaa duqeynta daaraha ayay ka mid tahay oo macnaheedu yahay waa weerari kartaan oo dili kartaan ayuu yiri xildhibaan ka mida xisbigeeda.
Madaxweyne ayuu sheeganaya inuu yahay mid dalka dhan u ah waxase cad inuu bartilmaameed ka dhiganayo xubin ka mida aqalka barlamaanka oo la doortey sidiisa oo kale ayay tiri Rashiida. Waxay raacisay waxa nasiib daro ah in xisbiga dimoqraadigu aanu sidii la rabay u difaacin Ilhaan.
Ilhaan Cumar ayaa iyada lafteedu isku dirtey xisbigeeda markii ay tiri waxay lacagta siyaasiintu ka helaan ururka Yuhuuda, taas oo markii dambe loo sheegay inay raaligelin ka bixiso maadaama isla xisbigeedu helo lacag taageeraysa danaha Yuhuuda.
Si kastaba ha ahaatee saxaafada xagjitka ee Yuhuuda maamusho ayaa sumcada Ilhaan kor u qaaday ayagoo ka dhigta doodaha ay qabtaan. Waxase doodahaasi keeneen in xagjirada Taram taageersan ay hanjabaado dila u soo direen xafiiskeeda.